आज २०७७ भदौ १६ गते मंगलबारको राशिफल – Dainik Sangalo
आज २०७७ भदौ १६ गते मंगलबारको राशिफल
September 1, 2020 433
आज २०७७ भदौ १६ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
Prevन्यास्रिएका शिक्षक–विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइको सहारा
Nextगोर्खा राइफलमा कार्यरत क्याप्टेन दीक्षान्त थापाको लद्दाखमा मृत्यु
ओलीले पाउने भए सुर्य चिन्ह, अध्यक्ष र महासचिव बिनाको निर्णय बिधान बिपरित हुने !
वायु प्रदूषणका कारण बन्द रहेका विद्यालयहरु आजदेखि पूर्ववत् रूपमा संचालन
संसद विघटन लगत्तै ओलीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया ! यस्तो छ अबको तयारी ! सबै दल अतालिए छिटो हेर्नुस।
‘आमालाई भागौँ भन्दाभन्दै मलाई पहिरोले बगायो’
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64623)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (55608)